देउवा पार्टी कब्जा गर्ने रणनीतिमा
in पत्रपत्रिका — ३ माघ २०७६, शुक्रबार १२:२५
काठमाडौ । १३औं महाधिवेशनबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइराला पछिल्ला दिनयता पार्टी सभापति देउवाविरुद्ध खेलेरै विरोधमा उत्रनुभएको छ । सामान्यतया कसैप्रति व्यक्तिगत तहमा आरोप प्रत्यारोपमा
उत्रिने विषयबाट टाढा रहदै आउनुभएका शशांक सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भने खुलेरै विरोध बोल्न थाल्नुभएको
छ । कोइरालानिकटहरुका अनुसार,कडा अभिव्यक्ति नदिने र विरोधीप्रति पनि सम्मानभावका साथ व्यवहार गर्ने कोइरालाको स्वभावमा दलमा विसंगति मौलाउँदै गएको र सभापतिको कार्यशैलीकै कारण कांग्रेस दिनदिनै कमजोर बन्दै जान थालेपछि भने एक्कासि परिवर्तन आएको हो।
देउवाको अनुदार कार्यशैली व्यवहारमै देखिन थालेपछि भने शशांक देउवासंग बिच्किनुभएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दलभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई नै किनारा लगाउदै आफूखुसी निर्णय लाद्न थालेपछि देउवा
उहानिकटस्थहरु बताउँछन् ।
शशांकले बहुमतको आडमा सभापतिले पार्टी भित्र लाद्ने गरेका निर्णयमा खोट देखाउँदै भन्नुभएकोछ । महाधिवेशनको मिति तोक्नु नै थियो भने पनि पार्टी केन्द्रीय समितिका सबैसँग सल्लाह गर्नुपर्यो ।
समयमै महाधिवेशन होस भन्ने त हाम्रो पनि चाहना छ नि । तर, सभापतिले एकलौटी घोषणा गरेर पार्टी नै कब्जा
गर्नका लागि अपनाउनुभएका सबै उपक्रम दुर्भाग्यपूर्ण छन् ।’ कोइरालाको यो कथनले देउवा एकलौटी ढंगले अघि बढ्न चाहेको स्पष्ट छ । पाटी भित्रका आफूसमेत अन्य
असहमत पक्षको विमति महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गरेकोमा नभई देउवाले सल्लाह र परामर्श किन
नगरेको भन्नेमा रहेको कोइरालाले बताउनुभएको छ । देउवाले पछिल्लो समय अपनाउनुभएको कार्यशैलीमाथि नै
प्रश्न उठाउँदै कोइरालाले भन्नुभयो ।हामी सबै मिलेर त्यही मिति तय गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो र ? शेरबहादुरजीले
किन सहमति गर्न चाहनुभएन ? त्यसैमा उहाँप्रति शंका उत्पन्न हुन्छ । काँग्रेसमा आफ्नो मात्रै पकड रहेको भ्रम नपाल्न देउवालाई चेतावनी दिदै पार्टी भित्र देउवाकै जति पकड आफ्नो पनि रहेको कोइरालाले बताउनुभएको छ । केन्द्रीय समितिले बहमतका आधारमा दलका २८ वटा विभागको संख्या बढाएर ४७ वटा बनाएको विषयमा समेत कोइरालाले असहमति प्रकट गर्नुभएको छ । चार वर्ष सम्म आवश्यकताबोध नभएका विभाग अहिले आएर उहाँलाई किन चाहियो भन्दै सभापति दललाइ आफ्ना कब्जामा ल्याउने रणनीतिमा अघि बढेको आरोप कोइरालाको रहेको छ। भूमिका सभापतिको हुन्छ । त्यसैले सभापति नै परिवर्तन गरेर पार्टी एक बनाउनुपर्छ । शेरबहादुरजीको नेतृत्व भएसम्म काँग्रेस एक हुँदैन ।’ शशांक संसदमा दलको उपस्थिति र भूमिकासंग पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न । संसद्मा काँग्रेसको स्वर कमजोर रहेको र त्यसलाई बलियोबनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। संसद्को यस्तो अवस्थाको दोष पनि सभापतिमाथि नै लगाउनुहुन्छ शशांक । उहाँको भनाइ छ। सभापति परिवर्तन नहँदासम्म न काँग्रेसमा एकता हुन्छ, न त काँग्रेस नै उँभो लाग्छ । शशांकले भन्नुभयो– ’शेरबहादुरजी असफल हुनुभयो । उहाँ एउटा गुटको मात्रै सभापति हुनुभयो । उहाँले सम्पूर्ण काँग्रेसको सभापति हुनुपर्यो ।’ शशांक सोमवार झापाको बिर्तामोडमा कार्यकर्तामाझ आफ्ना धारणा राख्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले संसद् अवरोध भएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तारूढ दल नै यसप्रति पूर्ण जिम्मेवार रहेको बताउनुभएको थियो ।